प्रतिरोधी क्षमता बढाउने औषधिको बिक्री पाँच गुणासम्म बढी, आफैं किनेर खानु कति ठीक? :: Setopati
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, कात्तिक ४
तस्बिरः किरण भण्डारीको ट्विटर
'कोरोनाअघि महिनाको दुई सय ट्याब्लेट बिक्न मुश्किल थियो,' उनले भने, 'अझ त्यो बेला डाक्टरले भनेको छ भने मात्र खानेहरू थिए। अहिले एक हजार ट्याब्लेट नै सामान्य रूपमा बिक्री हुन्छ। किन्नेहरू जो पनि हुन सक्छन्।'
'अमेरिका बस्ने छोराले भिटामिन-सी खानू भनेको छ। अस्ट्रेलियाबाट छोरी र आफन्तले भनेको भिटामिन-डी खानुपर्छ रे,' ग्राहकको भनाइ उद्धृत गर्दै चौधरीले भने, 'फाइदा के हो थाहा छैन। ट्याब्लेट माग्छन् अनि कहिले कसरी खाने भनेर उल्टै सोध्छन्।'
'ग्राहकको माग बढेकै कारण जिंक पनि बिक्री गर्न थालेका छौं। कोरोनाअघि यो थाहै थिएन भन्दा हुन्छ,' उनले भने।
'डाक्टरको सिफारिस लिएर पनि आउँछन्। नलिई किन्न आउनेहरू धेरै भइसके। भोलिका लागि राखेका हुन् कि खाएका छन् भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन,' उनी भन्छन्, 'यी औषधि किन यति प्रयोग भइरहेको छ, हामी फार्मेसिस्टलाई नै थाहा छैन। बेच्ने र किन्ने काम भइरहेको छ।'
'इम्युनिटी पावर बढ्छ भनेर सुनेकै आधारमा भिटामिन-सी र डी-क्याप्सुल प्रयोग बढिरहेको छ,' डा केसी भन्छन्, 'रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो हुनुपर्छ भन्ने सत्य हो। तर कोरोना रोकथाममा यी औषधि प्रयोग गर्नैपर्ने कुनै सम्बन्ध छैन।'
'भिटामिन-डीको मात्रा बढी भए शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा बढी हुन सक्छ जसकारण समस्याहरू आउन सक्छन्। अझ बच्चाहरूमा लिभर सिरोसिस हुन सक्छ,' उनले भने, 'यो भनेको कलेजोको गम्भीर समस्या हो।'
डा. केसीले भने, 'खानपान राम्रो भएको मानिसलाई थप भिटामिन क्याप्सुलहरू आवश्यकै पर्दैन। सुनेकै भरमा विभिन्न जडिबुटी र भिटामिन प्रयोग गर्नु राम्रो होइन। कोरोना रोकथाममा यी औषधिको कुनै सम्बन्ध छैन।'
थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले भिटामिन-डीले श्वासप्रश्वास समस्या कम गराउन सघाउने देखाएका छन्। अमेरिकी अखबार 'द न्यूयोर्क टाइम्स' का अनुसार भिटामिन-डी रूघा, मर्की र अन्य श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्यामा उपयोगी हुन्छ। कोरोनामा यसको प्रभाव कत्तिको छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०८:२८:००